Testosterone ဟော်မုန်းနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
အော်ဂဇင်, abstinence နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမဆိုကွန်နက်ရှင်?
Testosterone နဲ့ Erectile အလုပ်မဖြစ်
များသော လူငယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားကမှားယွင်းအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအပြစ်တင်ဖို့သူဖြစ်ရမည်ယူဆ။ ဤသည်အဖြစ်မြင့်မားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် အနည်းငယ်သာ testosterone ဟော်မုန်း တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, များစွာသော ED လေ့လာမှုများ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဆက်စပ်ပြနဲ့ T ဖြည့်စွက်ပြင်းထန်စွာ hypogonadal လူနာအတွက်သာထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အလုပ်မဖြစ်ယောက်ျား၏ plasma testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1980 Oct;9(5):355-66.
Schwartz MF, Kolodny RC, မာစတာ WH.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည့်အမျိုးသား ၃၄၁ ယောက်ရှိအုပ်စုတစ်စုတွင်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု ၁၉၉ ရှိအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးသည် Masters & Johnson Institute ၌ ၂ ပတ်ကြာမြင့်စွာလိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်ကုသမှုအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်သည်။ Testosterone ဟော်မုန်းကိုကော်ဒီယိုသတ္တိကြွပြီးနောက်ရေဒီယိုသတ္တိကြွရောဂါစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သွေးနမူနာများအားလုံးကိုည ၈း၀၀ မှ ၉း၀၀ နာရီအကြားညဥ့်အစာရှောင်ပြီးနောက်ကုထုံး၏ဒုတိယနေ့တွင်ရရှိခဲ့သည်။ ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်ဆင့် (635 ng / dl ဆိုလို) (629 ng / dl ဆိုလို) လိင်ကအလုပ်မဖြစ်အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းတန်ဖိုးများကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြဘူး။ သို့သော်မူလခွန်အားမရှိသောအမျိုးသားများ (N = 13) သည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေပြီးအလယ်အလတ်အားနည်းခြင်း (N = 180) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပျမ်းမျှ ၇၁၀ နှင့် ၅၇၄ ng / dl (p <710) အသီးသီးရှိသည်။ သုက်ပိုးမွှားများမပြည့်စုံသောအမျိုးသားများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏမှာ ၆၆၀ ng / dl (N = 574) ဖြစ်ပြီးအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုရှိသောအမျိုးသားများအတွက် ၆၃၂ ng / dl (N = 0.001) ဖြစ်သည်။ ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပြင်းအားများသည်ကုထုံးရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်းလူနာများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အဆိုးဆက်စပ်မှုရှိသည်။
erectile ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အတူလူနာအတွက် gonadal စနစ်က function ကို Pituitary ။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1979 Jan;8(1):41-8.
Pirke KM, Kockott, G, Aldenhoff J ကို, Besinger ဦး, Feil W က.
အဆိုပါ pituitary testicular စနစ်က psychogenic ခွန်အားမရှိသောနှင့်အတူယောက်ျား၌လေ့လာခဲ့သည်။ အသက် (၂၂) မှ (၃၆) နှစ်အတွင်းမူလတန်းစိုက်ထူနိုင်စွမ်းမရှိသောအသက်အရွယ်ရှိလူနာရှစ် ဦး၊ အလယ်တန်းစိုက်ထူသောစွမ်းအားမရှိသောအသက်အရွယ်ရှိသည့်လူရှစ် ဦး နှင့် ၂၃-၄၃ နှစ်အရွယ်မတိုင်မီသုတ်ရည်လွှတ်သည့်အသက် ၁၆ ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ E22 (= = 36) မရှိသောလူနာများနှင့် E29 (n = 55) လူနာများကို coital လှုပ်ရှားမှုဆီသို့ ဦး တည်။ စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူများ - နောက်ဆုံးအုပ်စုကိုနောက်ထပ်နှစ်ပိုင်းခွဲခြားခဲ့သည်။ အသက် ၂၁ မှ ၄၄ နှစ်အတွင်းရှိသာမန်အရွယ်ရောက်အမျိုးသား ၁၆ ယောက်ကိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရောဂါရှာဖွေမှုကိုစိတ်ရောဂါနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိကအားဝေဖန်ခံရလူနာလေ့လာမှုမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမခံခဲ့ရပါ။ ဆယ်ပါးဆက်တိုက်သွေးနမူနာတစ်ခုစီကိုလူနာထံမှ3နာရီတစ်ကာလအတွင်းရရှိသောခဲ့ကြသည်။ Luteinizing ဟော်မုန်း (LH), စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အခမဲ့ (မပရိုတိန်း-ခညျြနှောငျ) testosterone ဟော်မုန်းတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူနာများနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။
plasma Testosterone နဲ့ testosterone ဟော်မုန်းခွန်အားမရှိခြင်း, oligospermia, azoospermia နှင့် hypogonadism နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဆှဖှေဲ့ binding ။
br Med ဂျေ 1974 Mar 2;1(5904):349-51.
လောရင့် DM, Swyer GI.
Sephadex LH-20 ကို အသုံးပြု၍ ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ (+/- SD) ကို အသုံးပြု၍ သာမာန်လူကြီး ၂၇ ယောက်၏ ၆၂၀ +/- ၁၆၀ ng / 629 ml၊ ပုံမှန်အလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောခွန်အားမရှိသောအမျိုးသား ၂၇ ဦး၊ oligospermia ရှိအမျိုးသား ၂၀ အတွက် ၆၄၄ +/- ၁၇၈ ng / 160 ml နှင့် ၁၆ azoospermic အမျိုးသားများအတွက် ၅၆၃ +/- ၁၂၅ ng / 100 ml ။ ဤအတန်ဖိုးများကိုအဘယ်သူအားမျှသိသိသာသာကွာခြား။ hypogonadism ၏လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားရှိသည့်အမျိုးသား ၂၁ ယောက်အတွက်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း (+/- SD) သည် ၁၇၇ +/- ၁၂၂ ng / ၁၀၀ မီလီမီတာတွင်သာမန်အမျိုးသားများနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားသည် (P <27) ။အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း binding ဆှဖှေဲ့ဆိုလို ((50) H-testosterone ဟော်မုန်း tracer ၏ 3% ခညျြနှောငျဖို့လိုအပျပလာစမာ၏အရေအတွက်၏အပြန်အလှန်အားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်), သာမန်သင်ျခြိုနှင့် oligospermic ယောက်ျားများအတွက်အလားတူခဲ့ကြသည်။ azoospermic အမျိုးသားများအတွက်မူအနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းခြားနားမှုမှာသိသိသာသာမဟုတ်ပါ (P> 0.1) ။ 12 hypogonadal အထီး 16 အဘို့ testosterone ဟော်မုန်းစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးများသို့မဟုတ် prepubertal ယောက်ျားလေးများ (နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအဆင့်ဆင့်) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သူများနှင့်ဆင်တူစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့, နှောင့်နှေးအပျိုဖော်ဝင်၏လေးကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံးခွန်အားမရှိခြင်း၏ကုသမှုထဲမှာများသောအားဖြင့်အသုံးမကျသည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
testosterone ဟော်မုန်း erectile function ကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍရှိပါသလား
နံနက် J ကို Med ။ 2006 May;119(5):373-82.
Mikhail N ကို.
လိင်စိတ်တိုးမြှင့်အတွက် testosterone ဟော်မုန်းများ၏ကောင်းမွန်စွာထူထောင်အခန်းကဏ္ဍနေသော်လည်းအမျိုးသားများတွင်စိုက်ထူရန်၎င်း၏အတိအကျအလှူငွေမသိရသေးဖြစ်နေဆဲ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ erectile function ကိုအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နဲ့ယောက်ျားအတွက်၎င်း၏ကုထုံးတန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ကြမည်။
1939 ကနေဇွန်လ 2005 မှသက်ဆိုင်ရာစာပေ (အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, စပိန်) ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည် MEDLINE ကနေဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်စာသားကိုစာအုပ်တွေနဲ့မူရင်းဆောင်းပါးများနှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုအနေဖြင့် Cross-ကိုးကား၏လက်ရှာဖွေ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ, တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ, အမှု, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နှင့်အဓိကအသင်းအဖွဲ့များ၏လမ်းညွှန်ချက်များထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
တိရိစ္ဆာန်နှင့်ပဏာမလူ့လေ့လာမှုများ testosterone ဟော်မုန်းဟာ penile arterioles နှင့်လိုဏ်ဂူ sinusoids ၏ vasodilator အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်စိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သင်းအောက်ပါအများစု, သို့သော်အားလုံးမဟုတ်, ယောက်ျားစိုက်ထူ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ပြည့်စုံဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Hypogonadism ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်. 5% ဖြစ်ပွားနေသော ED တစ်ဘုံတွေ့ရှိချက်သည်မဟုတ်, နှင့်အထွေထွေထဲမှာသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားအသင်းအဖွဲ့မရှိခြင်းအခါပုံမှန်သို့မဟုတ်အတန်အသင့်အနိမ့်အဆင့်ဆင့်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်နှင့် erectile function ကိုလည်းမရှိ။
hypogonadal ယောက်ျားအတွက်ပညာရေး၏ကုသမှုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းကို အသုံးပြု. အများစုမှာစမ်းသပ်မှုတွေအတိုင်းအတာများပြဿနာများမှပင်ဆင်းရဲများနှင့်ကိုက်ညီမှုရလဒ်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်ခြုံငုံ, testosterone ဟော်မုန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Erectile function ကို hypogonadism ၏ပြင်းထန်ဒီဂရီနှင့်အတူလူနာအတွက် testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနှင့်အတူတိုးတက်လာဖို့ကပိုဖွယ်ရှိသည်။
testosterone ကုသမှုနိမ့်ပုံမှန်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားအတွက် phosphodiesterase5(PDE5) inhibitors ဖို့တုန့်ပြန် ameliorate လိမ့်မည်။ နံနက်သွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်း၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲတိုင်းတာခြင်း androgenecity အကဲဖြတ်ဖို့မျှမျှတတတိကျလွယ်ကူနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခမဲ့သို့မဟုတ် bioavailable testosterone ဟော်မုန်း၏တိုင်းတာခြင်းထိုကဲ့သို့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများ၌ရှိသကဲ့သို့လိင်-ဟော်မုန်း-binding globulin (SHBG) ၏အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းအခြေအနေများအတွက်အကြံပြုသည်နှင့် အဝလွန်ခြင်းအတွက်။
ရရှိနိုင်ပါဒေတာများကိုကောင်းမွန်စွာပုံမှန်အကွာအဝေးကိုအောက်တွင်, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အများဆုံးယောက်ျားအတွက်, သာမန်စိုက်ထူခြင်းနှင့် t ကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း၏ဦးထုပ်အဆင့်မြင့် erectile function ကိုအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ED နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့အတွက် hypogonadism များအတွက်စိစစ်မှု testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုမှအကျိုးစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည် hypogonadism အလယ်အလတ်မှပြင်းထန် hypogonadism ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနှင့်ပျော့၏အချို့ကိစ္စဖေါ်ထုတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် hypogonadism ၏အရေးပါမှုကို။
ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol ။ 2006 Dec;24(6):657-67.
Buvat J ကို1, Bou Jaoudé, G.
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) အတွက်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း (T) ကိုအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ် hypogonadism ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အရေးပါမှု, ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့။ စာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။
သွေးရည်ကြည်ကို T3များ၏အသက်အရွယ်ပြီးနောက်မတိုင်မီ 12% နှင့် 4% အပါအဝင် ED လူနာ 15% အတွက် ml ကို 50 ng / အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန် hypogonadism နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်အစားထိုးလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ arousal အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူရှင်းလင်းစွာကို T-မှီခိုဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အကြားအမြင်ရစိုက်ထူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို T-မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်သို့ T ရဲ့သက်ရောက်မှုတစ်ဦးချင်းအတွင်းကိုက်ညီသောတံခါးခုံကိုအဆင့်အထိထိုး-မှီခိုတက်ပေမယ့်2ထံမှ 4.5 ng / ml အထိတစ်ဦးချင်းစီအကြားသိသိသာသာ variable ကိုဖြစ်ကြသည်။ ပိုများသောသက်သေအထောက်အထားများကတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အမှုဖြစ်သကဲ့သို့အမျိုးသားများတွင်စိုက်ထူ၏ intrapenile သွေးကြောယန္တရားများအပေါ် T ရဲ့သိသိသာသာသက်ရောက်မှုအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည်။
ED နှင့်အတူ T ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချအသင်းအဖွဲ့ epidemiological လေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိထားသည်မရှိပါ။ အသက်ကြီးသောလူနာအတွက်တစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကအဖြစ်, T-ကုထုံးတသမတ်တည်း 3.46 ng / ml ကိုအောက်တွင် T နဲ့ငယ်ရွယ် hypogonadal လူနာ erectile function ကိုပြုပြင်ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေတစ် Meta-analysis သည်ပေမယ့်, ဒီကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအများအားဖြင့်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ရပြီ နောက်ပိုင်းတွင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို T တိုင်းတာခြင်းအောက်ပါ hypogonadism ရှိသည်ဖို့ရောဂါနေသောပညာရေးများအတွက်တိုင်ပင်။ ဤသူတို့သည်ဆင်းရဲသားရလဒ်များကိုဖြစ်ကောင်း Co-ရောဂါ၏မြင့်ပျံ့နှံ့အသုံးပြုပုံနှင့် ED သူ့ဟာသူ hypogonadism သွေးဆောင်ခြင်းအလိုငှါအချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးတည်းကို T ကုထုံးပျက်ကွက်သည့်အခါ T နဲ့ပေါင်းစပ်ကုထုံးနှင့် PDE5 inhibitor (PDE5I) ကို hypogonadal ED လူနာအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျးကိုပိုမိုသက်သေအထောက်အထားတစ်ခု PDE5I ပြင်းထန်စွာ hypogonadal ယောက်ျားအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစိုက်ထူ restore နိုင်ခဲ့သည်ကတည်းက T ရဲ့နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကို, လူအခြို့တို့အတွက် PDE5I တစ်ဦးပြည့်စုံအကျိုးသက်ရောက်များအတွက်လိုအပ်သောယူဆချက်ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ နိမ့် T ကအဆင့်ကိုအမြဲ hypogonadal ED လူနာအတွက်ပညာရေး၏တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်း, ED အတွက် hypogonadism များအတွက်ပြအတွက်အရေးကြီးသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကအနိမ့် T ကအဆင့် T ကကုထုံးတစ်ဦးတည်းပျက်ကွက်လျှင် PDE3I ပေါင်းစပ်ပြီးမတိုင်မီ T ကကုထုံး၏5လအစမ်းအပြစ်လွှတ်။